Ao, Awurade nka mʼanim wɔ wʼabofuo mu,
Hu me mmɔbɔ, Awurade, ɛfiri sɛ meyɛ mmrɛ;
Sane bra, Ao Awurade, na bɛgye me nkwa;
Obi a wawuo no renkae wo da,
Apinisie ama mayɛ mmerɛ.
Awerɛhoɔ ama mʼani so ayɛ me kusuu.
Mo nnebɔneyɛfoɔ, montwe mo ho mfiri me ho,
Awurade ate me mmɔborɔ su;
Mʼatamfoɔ nyinaa anim bɛgu ase